Jyoti Bhattarai – Makalu News » Jyoti Bhattarai
एमालेले कसरी यति छिटो सम्भव बनायो वडा अधिवेशन ?
एमालेले छोटो समयमै
वडा अधिवेशन गरेको छ जबकी कांग्रेसले एक वर्षदेखि तयारी गर्दा पनि १३ जिल्लामा अझै वडा अधिवेशन गर्न सकेको छैन।
ओलीले भने- परमादेश दिने पाँचै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने होइन र?
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परमादेश दिने सर्वोच्च अदालतका पाँचै जना न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।
परमादेश जारी गर्ने सबैले राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
आज एमालेको पालिका अधिवेशनलाई भर्चुअल रूपमा सम्बोधन गर्दै ओलीले परमादेशबाट सरकार बनेपछि अदालतमा पनि समस्या देखिएको बताए।
‘परमादेशबाट सरकार गठन भएपछि सर्वोच्च अदालतमा समस्या देखिएको छ। न्यायाधीशहरूले क-कसले के गर्नुभएको थियो, अलि खुलेको छ,’ उनले भने।
उनले एक जनाले मात्र नभई परमादेश दिनेहरूले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए।
सरकारमा भाग खोजेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले राजीनामा दिनुपर्ने माग भइरहेको छ। यसबारे राजनीतिक दलका नेताहरू सोमबारसम्म मौन थिए।
तर आज ओलीले एक जनाले मात्र नभई परमादेश दिने पाँचै जनाले राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
‘एक जनाले मात्र होइन परमादेश दिने पाँचै जनाले सर्वसम्मत फैसला गरेको होइन? एक जनाले मात्रै राजीनामा गर्ने? पाँचै जनाले राजीनामा गर्ने होइन?,’ उनले भने।गत असार २८ मा सर्वोच्चले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। परमादेशपछि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेका थिए भने देउवा असार २९ मा गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
‘फरार सूची’मा रहेकी सांसद मुख्यमन्त्री आचार्यलाई भोट हाल्न आउने चर्चापछि प्रहरी ‘अलर्ट’
प्रहरी नजरमा ‘फरार’ नेकपा एमालेकी सासद गुलेफुन खातुन मियाँ प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यलाई विश्वासको मत दिन आउने चर्चापछि प्रहरी ‘अलर्ट’ बनेको छ।
आज मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।
सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि उनी फरार छिन्।
‘उहाँ लामो समयदेखि प्रदेश सभाको बैठकमा आउनु भएको छैन,’ मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी जनार्दन जिसीले भने, ‘उहाँबारे हामी अलर्ट छौँ।’ फरार सासद भेटे के गर्नुहुन्छ? भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, ‘यसै गर्छौ भनेर अहिले भन्न मिल्दैन। तर प्रहरीले आफ्नो सुर छोड्दैन।’
सरकारी छाप र हस्ताक्षर किर्ते गरेको मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले सांसद खातुनलाई एक वर्ष कैद र १४ हजार ५८३ जरिमाना सजायको फैसला सुनाएपछि फरार रहेकी उनी प्रहरीको खोजी सूचीमा छन्। उनी मोरङबाट समानुपातिक सासद हुन्।
बाढीपहिरो र डुबान प्रभावित क्षेत्र निरीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज प्रदेश नम्बर १ का जिल्लाहरूमा जाने भएका छन्।
बाढीपहिरो तथा डुबानले पुर्‍याएको क्षतिको स्थलगत निरीक्षण गर्न प्रधानमन्त्री देउवा आज इलामलगायत प्रदेश नम्बर १ भित्रका जिल्लाहरू जाने कार्यक्रम छ।
प्रधानमन्त्री सुनसरी, मोरङ, इलाम र पाँचथरलगायत ठाउँ पुगेर बाढीपहिरो तथा डुवान प्रभावितहरूसँग भेट्ने कार्यक्रम छ। आज बिहान ८ बजे बाढी प्रभावित क्षेत्र गएर आजै साँझ काठमाडौं फर्किने कार्यक्रम छ।
प्रधानमन्त्रीसँगै सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललगायत मन्त्रीहरू पनि प्रदेश नम्बर १ को बाढीपहिरो तथा डुवान क्षेत्रको निरीक्षणका लागि जाने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवा बिहीबार र शुक्रबार सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका बाढीपहिरो तथा डुवान क्षेत्रको निरीक्षण गरेर फर्किएका थिए। सरकारले तत्कालका लागि अस्थायी आवास बनाउन बाढीपहिरो प्रभावितलाई ५० हजार दिने बताएको छ।
भारतमा केन्द्रीय गृह राज्यमन्त्री अजय मिश्रा टेनीका छोरा आशिष मिश्रालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
बर्दियामा हात्तीको आक्रमणबाट एकको मृत्यु
हात्तीको आक्रमणबाट बर्दियामा एक जनाको मृत्यु भएको छ।राजापुर १० हप्ती कोटियाबाटबाट
दक्षिणतर्फ एक किमी टाढा बाटोमा हात्तीको आक्रमणबाट ३५ वर्षका बेचन दहितको मृत्यु भएको हो।
घर फर्किंदै गर्दा गए राति उनलाई हात्तीले सुँड र खुट्टाले कुल्चिएको अनुमान गरिएको छ। आज बिहान बेचन मृत अवस्थामा फेला परेका थिए।मृतकको शरीरमा हात्तीले कुल्चिएको दाम देखिएको छ। घटनास्थल वरपर हात्तीका पाइला पनि देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी उपरीक्षक ईश्वर कार्कीले बताए।
मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुअघि प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिलाई भेट्ने
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन्।सत्तारूढ दलहरूले मन्त्री
हुनेहरूको नाम दिनेवित्तिकै आज मन्त्री नियुक्त गर्ने र आजै अपरान्ह ४ बजे सपथ खुवाउने कार्यक्रम छ।
साथै आज प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्ने कार्यक्रम छ।
मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुअगाडि प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न लागेका हुन्।
आज बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
मन्त्रीहरूको सपथ सम्बन्धी कानुनमा समस्या देखिएकोले भेट्न लागिएको स्रोतको दाबी छ। सपथसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सरकारले नयाँ विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सपथ सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न गत असोज ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएको थियो।
‘मेरो पहिलो प्रस्ताव त सहमतिमा सरकार बनाऔं भन्नेछ,’ बुधबार सार्वजनिक कार्यक्रममै आचार्यले भनेका थिए ‘यदि त्यो सम्भव भएन भने मात्रै दसैंपछि प्रक्रियामा जाउँला।’
सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष तामाङलाई पाँच दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति, दसैंअघि छुट्न गाह्रो
सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङसहित १२ जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ।
पहिलो चरणको अनुसन्धानका लागि मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरूलाई पाँच दिन थुनामा राख्ने अनुमति दिएको हो।
ब्युरो प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोका अनुसार दोस्रो चरणको अनुसन्धानका लागि पुन: अदालतको अनुमति लिइन्छ।
उनीहरूलाई संगठित रूपमा ठगी गरेको आरोप छ। १३७ जनाले जाहेरी दिइसकेको र अन्य मानिसहरू पनि जाहेरी दिन आइरहेको महतोले बताए।
‘अनुसन्धान गर्दै जाँदा अन्य कसुर देखिन आए मुद्दाको प्रकृतिअनुसार थप थुनामा राख्ने/नराख्ने टुंगो हुन्छ,’ महतोले भने। प्रहरी अनुसन्धान नसकिने भएकाले तामाङसहितका प्रतिवादी दसैंअघि छुट्ने सम्भावना कम छ।
तामाङ सिभिल सहकारीका पूर्वअध्यक्ष हुन्। सहकारीका हालका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ छन्। उनी पनि पक्राउ परेका छन्।
पक्राउ परेकाहरूमा भगवानबहादुर सिंह, मायोनानी महर्जन, एलिना तुलाधर, शंकरप्रसाद पाठक, संगीत श्रेष्ठ, राकेश महर्जन, बुद्धराज तामाङ, कौस्तुभ केतन ढुंगाना, विजयविक्रम शाह र हरिहर लामिछाने छन्। उनीहरू सहकारीको विभिन्न पदमा कार्यरत् कर्मचारी हुन्।
सहकारीको बचतको ठूलो हिस्सा तामाङले अन्य आफ्ना कम्पनीहरूमा लगानी गर्दै आएका थिए। उनले करिब ९ अर्ब रुपैयाँ सहकारीको निक्षेप ऋण विभिन्न कम्पनीका नाममा लिएका छन्।
ती कम्पनीले सहकारीमा ऋण तिरेको छैन। निक्षेप माग्न जाँदा नपाएपछि बचतकर्ताहरू प्रहरीमा पुगेका हुन्।
बन्यो २२० केभी क्षमताको कोसी करिडोरको पहिलो खण्ड
कोसी करिडोर २२० केभी प्रसा
सुनसरीको इनरुवावाट संखुवासभाको बसन्तपुर, बानेश्वर हुँदै तुम्लिङटारसम्मको २२० केभी डबल सर्किट टावर निर्माण गर्ने र टावरको एकतर्फ मात्र तार तान्ने काम सकिएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय एक्जिम बैंकद्वारा धनकुटाको हिलेमा सोमबार कार्यक्रम आयोजना गरी पहिलो प्याकेज अन्तर्गतको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको थियो।
अनुमानित लागत ११ करोड २० लाख अमेरिकी डलर रहेको प्रसारण लाइन आयोजना नेपाल सरकारको लगानी र भारत सरकारले एक्जिम बैंकले दिएको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको हो। एक्जिम बैंकबाट आयोजनाका लागि ९ करोड अमेरिकी डलर सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह भएको छ।
कोसी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजनामार्फत तुम्लिङटारदेखि बसन्तपुरसम्म करिब १००० मेगावाट, ढुंगेसाँघु (ताप्लेजुङ) देखि बसन्तपुरसम्म करिब १००० मेगावाट र बसन्तपुरदेखि इनरुवासम्म करिब २००० मेगावाटविद्युत प्रसारण गर्न सकिन्छ। साथै एक नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरुमा विद्युत् विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण तथा वितरण सञ्जाल बन्ने छ।
कार्यक्रममा एक्जिम बैकका प्रतिनिधि विश्वजीत गर्गले प्रसारण लाइन आयोजनाको पहिलो प्याकेज निर्माण सम्पन्न भएको साँचो ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
कार्यक्रममा धनकुटा नगरपालिका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपालस्थित भारतीय दूतावासकी उपप्रमुख नामग्या सी खाम्पा लगायत उपस्थित थिए।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माणपछि प्रदेश नम्बर १ मा विद्युत प्रसारण तथा वितरणका लागि मेरुदण्ड तयार भएको बताए।
कोसी करिडोर र कावेली करिडोर प्रसारण लाइनलाई लिंक गर्न लागिएको जानकारी दिँदै उनले आयोजना अन्तर्गतका सबस्टेसनहरुको निर्माण सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति गुणस्तरीय र विश्वसनीय हुने बताए।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव भेटुवालले प्रसारण लाइनको निर्माणबाट अरुण र तमोर जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत ग्राहककोसम्म पुर्‍याउन पूर्वाधार तयार भएको बताए।
प्रसारण लाइन निर्माणपछि यस क्षेत्रका खोलानालामा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको लगानीलाई थप सुनिश्चित बनाएको बताए।
नेपाल र भारतबीचको सहकार्यका लागि ऊर्जा प्रमुख क्षेत्र रहेको बताउँदै भारतीय दूतावासकी उपप्रमुख खाम्पाले भारतले जारी गरेको क्रस बोर्डर विद्युत व्यापार निर्देशिकाका बमोजिम नेपालले भारतबाट विद्युत खरिद गर्न मात्र नभएर बिक्री गर्नसमेत पाउने बताइन्।
रण लाइन आयोजनाअन्तर्गत पहिलो प्याकेजको प्रसारण लाइन निर्माणको काम सकिएको छ।